Karrion Kross dia manjaka ao amin'ny NXT TakeOver: Ao an-tranonao - Wwe
Karrion Kross mitazona anaram-boninahitra NXT amin'ny lalao Fatal Five-way ao amin'ny TakeOver: In Your House
Anio hariva amin'ny hetsika lehibe an'ny NXT TakeOver: Ao an-tranonao, Karrion Kross dia niaro ny anaram-boninahiny NXT tamin'ny mpanohitra efatra hafa. Ny NXT Champion dia nifanandrina tamin'i Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, ary Pete Dunne tamin'ny lalao Fatal Five-Way.
mamaly ny lahatsoratro izy fa tsy manomboka
Ny lalao dia nanatri-maso fifanekena vetivety teo amin'ireo superstars tafiditra tamin'ilay lalao. Nisy fotoana i Cole, izay voafandrika tao anaty apron, dia novonoin'i Dunne, O'Reilly ary Gargano talohan'ny nametrahan'i Kross azy.
. @AdamColePro & @KORcombat , sahia hoy izahay, 𝘴𝘩𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘮 fotsiny. ♥ ️ #NXTTakeOver #NXTChampionhip @WWEKarrionKross pic.twitter.com/lhNeSjwkim
- WWE (@WWE) 14 Jona 2021
Cole sy O'Reilly koa dia nametraka ny tsy fitovizany nandritra ny fotoana kelikely mba hamoahana an'i Kross amin'ny alàlan'ny fametahana azy amin'ny latabatra amin'ny alàlan'ny herinaratra mahery. Na izany aza, tamin'ny farany, Kross no nivoaka ny lalao, mbola ny Tompondakan'i NXT ihany.
Karrion Kross dia nanjaka tao amin'ny NXT TakeOver: Ao an-tranonao
Mianjera ary mivavaha! @WWEKarrionKross dia MBOLA ANAO #WWENXT Tompondaka. #NXTTakeOver pic.twitter.com/mSGLgUMdOY
- WWE amin'ny FOX (@WWEonFOX) 14 Jona 2021
O'Reilly dia nitady izay hahatonga an'i Cole hivoaka amin'ny faribolana, fa i Kross kosa dia nanararaotra ny toe-javatra ary nihidy tao amin'ny Akanjo Kross. Navotsotr'i O'Reilly i Cole, izay efa nokapohina sy maratra, ary farany dia nilavo lefona hanome an'i Kross ny fandresena.
Kross dia nanao fampisehoana natanjaka tao amin'ny TakeOver: Ao an-tranonao ary nanaporofo ny antony nahatonga azy natoky ny handray lehilahy dimy indray mandeha. Na izany aza, araka ny voalaza tetsy ambony dia nisy fotoana izay toa toa afaka miala avy eo an-tànany ny lohateny NXT.
Tamin'ny lalao izay mety ho ny tsara indrindra tamin'ny fampisehoana, Kross nivoaka avy tao amin'ny Capitol Wrestling Center izay mbola tompon-daka NXT, nandresy ny efatra tamin'ireo tsara indrindra natolotry NXT tamina tifitra iray. Mbola ho hita eo hoe iza no afaka manohitra ny The Herald of Doomsday amin'ny loka ambony amin'ny marika mainty sy mavo.
Raha te hahalala bebe kokoa amin'ity lalao ity sy ny sisa amin'ny seho dia jereo ny tsikera nataon'i Sportskeeda momba ny NXT TakeOver: Ao an-tranonao etsy ambany.
Mba havaozina hatrany amin'ny vaovao farany, tsaho ary resabe ao amin'ny WWE isan'andro, misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube Sportskeeda Wrestling .
ny fomba hampifaliana ny tenako amin'ny fanambadiana tsy sambatra
dragona vaovao baolina z super
mahatsiaro namadika ahy ny vadiko
sonia bandy liana fa matahotra
wwe aj style hira hira